Ku rakib oo ku xir Yakuake KDE | Laga soo bilaabo Linux
Wolf | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Yakuake waa emulator terminal ah qaabka ugu wanaagsan ee Quake, ciyaarta toogashada caan ku ah. Inkasta oo ay noo ogolaaneyso inaan qabano howlo isku mid ah oo aan ku qaban karno terminal caadi ah, Yakuake wuxuu leeyahay faa iidada ah inuu ku ordo asalka, si markaa adigoo riixaya F12 aan u tusno ama u qarin karno sida aan u jecleynay, ayadoon loo jeedin in la joojiyo shaqooyinka habka, iwm
In kasta oo ay jiraan isticmaaleyaal ka xishooda wax kasta oo la xidhiidha terminal-ka intii suurtogal ah, runtu waxay tahay inay jiraan qayb weyn oo ka mid ah dadka isticmaala Linux ee dareemaya raaxo leh oo iyagu maalin kasta u adeegsada dhammaan noocyada waxqabadyada Si sax ah iyaga, Yakuake waa hal-abuurnimo muhiim u ah. Marka, waxaan sharxi doonaa sida loo rakibay iyo qaar ka mid ah qaababka isku xigxiga, kiiskan marka la eego KDE, laakiin waa in loo qaataa in tillaabooyinku u shaqeeyaan deegaanno kale sidoo kale.
1) Qaar badan oo ka mid ah qaybinta Linux ayaa durba Yakuake ku leh keydadkoodaMarkaa bal horta halkaas fiiri gudaha Arch waxaa lagu rakibay amarka
Iyo hubaal gudaha Ubuntu iyo noocyo kala duwan leh:
Haddii ay dhacdo inaadan helin, waa inaad tagtaa Yakuake ee KDE-Look.org oo soo dejiso feylka u dhigma deegaankaaga desktop. Waqtigan xaadirka ah, waxa caadiga ah waa in loogu talagalay nooca 4 ee KDE. Kadib, waa inaad furtid faylka oo aad raacdaa tilmaamaha README si aad u rakibto. Waa wax aad u fudud.
2) Marka si fiican loo rakibo, waa inaanu socodsiinaa markii ugu horeysay. Si tan loo sameeyo, waxaan tagnaa liiska 'Kickoff menu' oo waxaan ka raadineynaa qaybta Nidaamka - ama waxaan si toos ah ugu qornaa "yakuake" meenuga - oo guji.
3) Isla markiiba, waxaan ku arki doonnaa terminaalka hoos-u-dhaca kumbuyuutarkeena. Haddii aysan taasi ahayn, riix furaha F12 si aad u muujiso ama u qariso.
4) Dabcan, dejintu way hagaagi kartaa, si aad ula qabsato Yakuake dhadhankeena. Si aan u helno xulashooyinka, waa inaan gujino fallaarta oo tilmaameysa hoos, geeska midig ee hoose. Marka sidaas la sameeyo waxay fureysaa menu, kaas oo aan uga bixi karno doorbidyada Yakuake. Dhexdooda, waxaan ka heli qaybaha soo socda:
Halkan waxaan ku dejinay cabirka, booska, iwm.
Muuqaalka waxaa lagu beddeli karaa maqaarka (waxaa laga heli karaa soo dejinta).
5) Hadda waa waqtigii lagu dari lahaa barnaamijkan bilowga, si had iyo jeer loo helo. Ma aqaano habka loo adeegsaday Gnome, laakiin KDE aan tagno Nidaamka Xulashada, qaybta Maamulka Nidaamka, Bilaabida iyo Xiritaanka.
6) Daaqada xigta, waxaan ku siin "Add program". Waxaan ka xulaneynaa liiska Yakuake, ama waxaan si toos ah u qorno magaca, waana aqbalnaa.
Si dhakhso leh oo fudud, sax? Haddii aad si sax ah u raacday tillaabooyinkan, waxaad horey u heli doontaa Yakuake oo si caadi ah uga shaqeeya nidaamkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Ku rakib oo ku xir Yakuake KDE
Ku soo dhowow barta 😀
Xaqiiqdii, Yakuake Waxaan u isticmaali jiray waqti xamaasad leh… markaan isticmaali jiray Gnome waxaan isticmaali jiray Guake, KDE waxaan ku isticmaali jiray Yakuake, waa codsi muhiim ii ah 😀
Tababar wanaagsan, oo faahfaahsan, si aad u wanaagsan loo sharaxay 😉
Si tartiib ah ayaad u socotaa? Waxay noqon doontaa da'da, taas oo horeyba u sameysay qoraal kale waxba ma qabanayso.
Haa? uff ... haa haa, waan gaabinayaa HAHAHA ... waa inay ahaataa dhammaan waxyaabaha aan madaxayga ku haysto 🙂
Waa inay ahaato dhammaan waxyaabaha aan madaxayga ku haysto
Qaacidada xiisaha leh.
Waad ku mahadsantahay soo dhaweynta. Waxaan horeyba kuugu soo diri lahaa maqaal dheeri ah si aad u ogaato inaad iskaashi ka sameyn kartid baloogga, laakiin ma aanan helin, haha. Waqtigan xaadirka ah waxaan dhigayaa casharro aan ku daabacay barteyda waqtigaas, laakiin wax badan ayaan qaban doonaa.
Hagaag waad ogtahay hahaha, waa lagaa soo dhawaynayaa inaad sii wadato wadashaqaynta, kani waa qoys ... maaha kelitalisnimo HAHAHAHA !!!
Muddooyinkan dambe waxaan soo dirayaa farriimo XDD-na ma muuqato!
Horeba waad u ogtahay inay si qoto dheer kuu leeyihiin.
Sikastaba, si dhex dhexaad ah, midkiina ma soo baxayo.
Waxaa jira farriin kale oo adiga kaa timid oo ku jirta warkan, laakiin waxaad ka faallootay sawirkii ugu horreeyay ... sidaa darteed halkan kama muuqato Hadaad gujiso, waad arki doontaa, haha.
Ahh ok, waxaan dhihi jiray XDDD
Marwalba waan isticmaali jiray Konsole, laakiin hadda oo aan isku dayay Yakuake waxaan ka helay wax badan oo wax ku ool ah, gaar ahaan inay ku shaqeyso asalka si aan u wici karo markii loo baahdo. Aad u faa'iido badan.
Waxbaridaada ayaa la mahadiyey.
Ma jirto sabab, runtu waxay tahay inay waxtar badan leedahay. Salaan.
Yakuake, jacayl, konversation iyo choqok waa waxa ugu horeeya ee aan rakibo oo waxaan ku daraa qalab aad u fiican oo waxtar leh nidaamka bilowga.
Waa maxay jacaylku? Sababtoo ah magaca ayaa mar hore igu tuuray
waa inuu ahaado amarok XD
Ama AppArmor, haha.
Maya Maya Amarok, maahan AppArmor. Waa Jacayl, oo ka mid ah barnaamijyada Alaabta KDE. Macluumaad dheeraad ah:
Hagaag, horeyba waa inaad caruurnimo u noqotid si magacaas yar barnaamij loogu daro
Waa inaad aragti gaabni ka noqotaa inaad u maleyso in Isbaanishku yahay luqadda keliya ee adduunka ka jirta. Jacaylku waa soo gaabinta ereyga Aqoob-ka-ciyaarka Misticmaal Of Rilo. Waa iska soo dhac fudud.
Waa hagaag nin laakiin waxaad horeyba u ogtahay in haddii aad u maleyneyso Isbaanish in magaca uu yahay ciyaal 100%
Kani waa adiga
maxaa yeelay hadaadan ahayn isagu wuxuu si badheedh ah kuu soo guuriyey
Hagaag maya, aniga maahan. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa in isticmaalehan uusan hadda ahayn markii ugu horreysay ee uu maqaallo ka qabsado balooggan ...
Fadlan fiiri liisanka boggan iyo waxa ku xidha qodobkan, markaa si badheedh ah u nuqul wax (si kasta oo ay u xun tahayba).
Taasi waa sax, haddii asal ahaan aysan waxba dhicin.
Tani waa waxa ku jira hoose:
Feejignaan: Haddii aan si kale loo tilmaamin, ruqsadda degelku waa Creative Commons Attribution 2.5, kaas oo laguu oggol yahay inaad nuqul ka sameyso, wax ka beddesho, la xiriirto oo aad u qaybiso waxyaabaha ku jira qodobkan, guud ahaan ama qayb ahaan, oo aad ku daabacdo ama ku faafiso mid kasta degel kale ama warbaahin isgaarsiineed, illaa iyo inta ay ka mid tahay ama xustay (1) magaca degelkan, (2) xiriir joogto ah oo dukumintigan ah, (3) magaca qoraaga iyo (4) isla liisanka qaybinta .
Hadda, sida had iyo jeer ... ku dhowaad qofna (maaha inuu noqdo mid buuxda) wuxuu u fuliyaa sidii ay ahayd _¬
Dhamaadka waxay dhigeysaa isha, waxaan qiyaasayaa inta ay dhigayaan isha inaysan jirin wax dhibaato ah sax?
Waa waxa uu liisankaagu sheegayo, markaa haa, dhib malahan 🙂
Waa la caddeeyay waa inaad sheegtaa oo keliya iskuxirka, laakiin magaca isha iyo sidoo kale qoraaga, tanina waa dhif (runti, weligay maan xusuusan) sidan bay ahayd.
Xiriiriyaha ayaa gadaal dhigay markii aan arkay oo aan dhigay xiriirku inuusan ahayn
Quixote Bilaash ah dijo
Waad salaaman tihiin, waad ku mahadsan tihiin qoraalada wax badan iga caawinaya
Waan ogahay inay tahay galitaan hore, laakiin hadda waan arkay tan iyo markii aan rakibay (waxaan sameeyay tillaabooyinka aad tiraahdo kahor aqrinta tan), laakiin waxaan haystaa dhibaatada markaan bilaabayo marwalba arko yakuake oo lasoo bandhigo.
Ma jirtaa waddo looga fogaado?
Ku jawaab Free Quixote
Waqti badan bay ahayd laakiin waxyaabaha qaarkood ayaa weli sidii hore sii ahaanaya. Dhibaatada aad xustay waxaa sabab u ah xaqiiqda ah inay bilaabmayso laba jeer, sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa, ugu horreyntii, inaan hubiyo isku xirnaanta codsiyada aad qorsheysay si otomaatig ah aad ugu bilowdo bilowga (laga bilaabo guddiga doorbidista). Haddii aad aragto inay jiraan laba galitaan Yakuake, tirtir hal - ama labadaba - oo arag waxa dhacaya. Haddii ay dhacdo inaad tirtirto labadaba ka dibna Yakuake uusan bilaabin, isku day inaad mar labaad ku darto bilowga si aad u aragto haddii taasi ay gaari doonto natiijada la doonayo. Salaan.
GNOME 3.4 waa la heli karaa!
F-Droid: Suuqa loogu talagalay Android oo keliya codsiyada bilaash ah